Qorshe Xumada Qoyska Soomaaliyeed iyo Saamaynta Dhimashada | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Waalidka & Diinta Islaamka |Tukesomalism.com
Liibaan Cabdulkhaadir, November 21, 2016
Bashir Maxamed, May 1, 2018
Maansada; Qaswade Qaran!
Cabdicasiis Maxamed Shidane, June 10, 2018
Daryeelka Caruurta Dhasha Loo Sameeyo. Waa Maxay APGAR score ?.
Miski Cabdinuur Salal, March 5, 2019
Qorshe Xumada Qoyska Soomaaliyeed iyo Saamaynta Dhimashada
Maxamed Cabdirisaaq Diriye — November 4, 2019
Umul-raac waa dhimasho gudaha Soomaaliya aad looga yaqaan, culayskeeduna soo siyaadaya se' aan la isweydiin, maxaa sababa umul raacidda?; nugaylka hooyada xaggee buu kasoo bilowdey?
Shey kasta oo la dhisayo ahdaaf iyo nidaam gooniya baa loo maraa si looga ilaaliyo gol-daloolooyinka. Dhibka ugu badan oo haysta Afrika waa hormar la’aanta iyo hoosaynta hab nololeedka bulsheed, intaas waxaa u dheer qorsha xumida qoyska, taas oo kulan sata nolol tayo xun iyo geeri.
Umul-raac waa dhimasho gudaha Soomaaliya aad looga yaqaan, culayskeeduna soo siyaadaya se’ aan la isweydiin, maxaa sababa umul raacidda?; nugaylka hooyada xaggee buu kasoo bilowdey?
Xadiga dhimashada hooyada waa halbeeg ka mid halbeegyada lagu miisaamo heerka hormarka ee waddan gaaro. Waa dhimasho qoran oo watigeedii baa dhamaadey, hase ahaatee waxaa jira canaasiir dhaqameed iyo kuwo caafimaad oo gadaal kasoo riixaya, hooyadana nugayl banaan yaal ah ka dhigaya.
Qoysaska Soomaalida sidey ubadan yihiin, ma isticmaalaan nidaam qoys, hooyada caafimaadkeedu, waxuu ku jiraa kala fogaynta dhalidda ilmaha, taas macneheedu maaha dawo ama duritaan isticmaal ee diinta qaab ku fartay samee ee ah nuujinta ilmaha labo sano.
Waa qorshe qoyseed ay dan-wayn ugu jirto, daryeel iyo caafimaadka hooyada, xanaanada iyo barbaarinta ilmaha iyo danta odaga reerka.
Waxaa nagu batay ilmo sagaal sagaal bilood kala wayn, hooyadii waxay la dalaa dhacaysaa dhiig la’aan, sagaal bilood bay ilmo caloosha ku sidey, waxay ka dhaxashay dhiig la’aan, nafaqo ku filanna ma heli karto, markey dhashana wey dhiig baxaysaa, intaas waxaa u dheer shaqo joogto oo meeris nololeed ah, wey nuujinaysaa, iyadii oo aan galaan dhiig ah lagu arag bay misana uurkale qaadeysaa. Intaas waxaa u wehesha qoyskaas sida badan saboolnimo.
Hooyadu haddii ay si joogta u nuujiso ilamaha uur ma qaaddo badanaa, mana gureyso, haddey cunno nafaqo leh cunto, balse markey is khiyaanto waxay halis galinaysaa ilmaheeda iyo nafteeda.
Daryeelka, edbinta, tababaridda iyo xanaaneynta ilmaha waxaa u roon kala fogaynta dhasha, lix ilmood oo sanad sanad kala weyn, midna waqti gaar ah loo heli mayo, mid kasta markuu dhabta hooyadi ka gurguurto baa naxariis ugu danbaysa midkastana kan ka wayn baa dilaya.
Naasnuujinta mudada dheer waxaa kujira faa’iido caafimaad, mid daryeel, kobcinta garaadka ilmaha iyo caafimaad hooyada. Umul raacidda waxyaabo badan baa keena sida dhiig karta, caabuqa, dhiig baxa iyo dhiig la’aan se waxaa hooyo iyo aabbe u ah la’aanta adeeg caafimaad ee haraysay waddankeenna.
Tags: Qorshe Xumada Qoyska Soomaaliyeed iyo Saamaynta Dhimashada
Next post Kacaankii Hormarinta Burkiino Safo (1983-1987)
Previous post Guurku Waa Kaabaha Bulshada
About the Author Maxamed Cabdirisaaq Diriye
Waa qoraa ka tirsan Tuke Somalism. Wuxuu wax ka qoraa cilmiga Bulshada, nabadda iyo amniga, siyaasadda, sooyaalka, arrimaha bulshada, xallinta khilaafaadka, dhaqanka, Afka iyo aqoonta guud ahaaneed. Wuxuu bartay cilmiga Bulshada, nabadda iyo amniga. Heerka koowaad wuxuu bartay cilmiga bulshada (Sociology), heerka labaad ee jaamacada (Master degree) wuxuu bartay Nabadda iyo Amniga ‘Peace and Security. Siddoo kale qoraaga ayaa soo bartay cilmiga sheybaarka. Qoraagu wuxuu bare sarre ka ahaa jaamacada Bariga Afrika.